काठमाडौंका रेष्टुरेन्टको शौचालयलाई सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्ने बनाउँछौं – मेयर शाह (बिशेष अन्तर्वार्ता) | Sunaulo Nepal
अशोक घिमिरे र शर्मिला पाठक / काठमाडौँ – मुलुकको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह ६१ हजार ७६७ मतसहित प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन्।
‘र्‍यापर’को पहिचान बनाएका प्रमुख शाहले ह्वाइट हाउस इन्ष्टिच्युड अफ टेक्नोलोजीबाट सिभिल इञ्जिनियरिङमा स्नातक र भारतको कर्नाटक विश्वेश्वरैया राष्ट्रिय प्रौद्योगिक संस्थानबाट स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।
संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ। माध्यामिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, खानेपानी, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र विकासलगायत अधिकार स्थानीय तहका क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन्।
१. काठमाडौंको प्रमुखका रूपमा निर्वाचित हुनुभयो, तपाईंका योजना र प्राथमिकता के/के हुन् ?
काठमाडौं उपत्यकाको इतिहास, संस्कृति, सम्पदा, आयुर्वेद, योगध्यानका बारेमा बालबालिकाले सजिलो तरिकाले बुझ्ने गरी पाठ्यक्रम बनाउँछौं। यसले गर्दा भोलिका दिनमा देश तथा विदेशबाट आएका पर्यटकसँग भेट हुँदा बालबालिकाले कला, संस्कृति, इतिहासका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन सकू .
२.महानगरले यसअघि बनाएको पाठ्यक्रमले यी विषय समेट्न सकेनन् भन्ने हो ?
यसअघिका पाठ्यक्रमले धेरै कुरा समेट्न सकेको छैन। लिखित रूपमा भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा व्याख्या गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ। यहाँको कला संस्कृति, साँस्कृतिक वैभवका बारेमा बुझ्न धेरै पुस्तक छन्। तर त्यो विषयलाई व्याख्या गर्नसक्ने जनशक्ति छैनन्। प्राविधिक रूपमा पनि शिक्षाको गुणस्तर बढाउने योजना अगाडि सारेका छौं। मोबाइलमा ‘भिडिओ च्याट’ गरेर मात्र अनलाइन कक्षा हुँदैन, यसले शैक्षिक स्तर बढाउँदैन। प्रविधि तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ।
३.पूर्वाधार र विद्यार्थी नभएका सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनुहुन्छ ?
४.‘थ्रिडी भिजुअलाइज’ गरी पढाइने भन्नुभयो, अत्यन्त न्यून आयस्तर भएका बालबालिकालाई कसरी प्रविधिको पहुँचमा पुर्‍याउनुहुन्छ ?
बिहानदेखि साँझसम्म बालिबालिका विद्यालयमा हुन्छन्, विद्यार्थीले केही गल्ती गरेको अवस्थामा अभिभावकलाई दोष देखाउन पाइन्छरु विस्तारै यसलाई संस्कारका रूपमा विकास गरेर लैजानुपर्छ। गुरू र शिष्यको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, कसरी बोल्ने, व्यवहार गर्ने भन्नेबारेमा जानकारी दिनुपर्छ। शिक्षा संस्कारबाट सुरू हुनुपर्छ। हामी महानगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको काम भोलिबाट नै हुन्छन्।
५. आगामी पाँच वर्षसम्म तपाईंले महानगरको नेतृत्व गर्दा यहाँको शिक्षाको स्तर कस्तो हुन्छ ?
६.स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित बनाउनुहुन्छ ?
७.मेलम्ची आयोजनाले केही हदसम्म काठमाडौ्मा पानीको आपूर्ति गरिरहेको छ, यो अझै पर्याप्त छैन, पिउने पानीको पर्याप्ततालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
सरकारी कार्यालयमा रिभर्स बोरिङ गराइयो भने आसपासका क्षेत्रमा बोरिङको लेभल बढ्छ। खाली रहेका स्थान, सरकारी कार्यालयका परिसरमा स(साना पोखरी खनेर आकासेपानी जम्मा गर्न सकिन्छ। आकासेपानी पोखरीमा जम्मा गरेर उपत्यकाका नदी नालामा आउने बाढी पनि रोक्न सकिन्छ। यसबाट भूमिगत जल सतह माथि आउँछ। बोरिङ र इनारको सतह बढ्छ, यसले खानेपानीको समस्या केही हदसम्म कम हुन्छ।
मेलम्चीको पानी आउँदै छ। पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी भित्रिँदैछ। मेलम्चीबाहेक दैनिक १३ करोड लिटर पानी जलाधार क्षेत्रबाट आइरहेका छन्। हामीलाई चाहिएको दैनिक ४३ करोड लिटर हो। अब भइरहेको मूलहरूलाई फुटाउने हो। ढुंगेधाराको संरक्षण गरी विगतमा झैं नियमित पानी आउने बनाउन सकिन्छ। धेरै ढुंगेधारामा पुनः मूल फुटाउने योजनामा छौं। वडा नं १७ मामात्रै १७ बढी ढुंगेधारा छन्। ती ढुंगेधाराको मूलमा पोखरी खनेर ढुंगेधारामा पानी निकाल्न सकिन्छ। ढुंगेधाराबाट जम्मा भएका पानीलाई ट्यांकीमा जम्मा गरेर वितरण गर्न सकिन्छ।
८.उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। फोहोरको दीर्घकालीन समाधान कसरी निकाल्नुहुन्छ ?
अहिले नुवाकोटको सिसडोलमा ‘डम्पिङसाइट’ छ। ‘इन्सिनरेटर सेल’ राखेर बञ्चरेडाँडामा बनाइएको नयाँ डम्पिङसाइट अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन। त्यसको अनुगमन महानगर र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट पनि भएन। त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्छौं। ठाउँ(ठाउँमा इन्सिनरेटर ९फोहोर जलाउने मेसिन० राखेर फोहोरको मात्रालाई एक प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ।
स्रोतमा नै कुहिने र नकुहिने गरी फोहोरलाई छुट्याउन सकिन्छ। कुहिने र नकुहिने फोहोर एउटै गाडीमा हालेर लैजाने भए नागरिकले किन फोहोर छुट्टयाएर राख्छन् ररु फोहोर लिनका लागि हामी दुई प्रकारका गाडीको व्यवस्था गर्छौं। सातामा दुई दिन फोहोर लिन आउँदा फरकफरक दिन कुहिने र नकुहिने गाडी पठाउँछौं।
टोल(टोलमा कन्टेनर राखिएको अवस्थामा पनि दुईरदुई वटा कन्टेनर राख्छौं। स्रोतमा नै फोहोरलाई छुट्याउन सकियो भने कुहिनेलाई जैविक मलका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। नकुहिने फोहोरको त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। जैविक मललाई राजधानी नजिकका खेतीयोग्य काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङलगायत जिल्लामा बिक्री गर्न सकिन्छ।
९.काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन र अव्यवस्थित ‘पार्किङ’लाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
सिसिटिभी तत्काल खरिद गरेर जोड्न सकिन्छ। सिसिटिभीसँगै सार्वजनिक बसमा जिपिएस सिस्टम लगाउन सकिन्छ। कतिपय चोकमा यसअघि नै सिसिटिभी जडान गरिएका छन्। तर प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा यसले काम गरेरनगरेको कसैलाई पनि थाहा छैन। सिसिटिभीसँगै सडक बत्ती पनि जोड्छौं।
१०।विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न तपाईंको के सोच छ ?
११.सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वासिलो कसरी बनाउने ?
१२.सडकहरू साइकलमैत्री भएनन् भन्ने गुनासो पनि छन् नि ?
१३.पूर्वाधार निर्माणमा विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुँदा नगरबासीले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ नि ?
सडक विभागले सडक बनाउँछ। सडकको निश्चित ‘डेन्सिटी’, ‘टेम्प्रेचर’ र ‘कम्प्याक’ हुन्छ। यसको अनुगमन महानगरले गर्छ। म आफैं पनि इन्जिनियर हुँ, म पनि जान्दछु। डेन्सिटी पुगेन भने फेरि पेल्न लगाउन सकिन्छ। काम भइरहेको स्थानमा अनुगमन भइरहेको छैन। सडकमा ढलान गरियो तर ढलानमा प्रयोग गरिएका सामग्रीको गुणस्तर कस्तो छरु निर्माणकर्ताले जस्तो प्रतिवेदन दियो त्यसलाई मान्ने गरिएको छ। अब त्यस्तो हुँदैन, सडकमा कस्ता सामग्रीको प्रयोग गरिएको छ, पहिले त्यो महानगरको प्रयोगशालामा परीक्षण हुन्छ। अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँछौं। बाटामा हुने खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्न ‘इन्फ्रास्टकचर एम्बुलेन्स’को व्यवस्था गर्नेछौं।
१४.हरियाली सहरी सौन्दर्यको अनिवार्य शर्त हो, महानगरलाई हराभरा बनाउन के गर्नुहुन्छ ?
प्रत्येक घर, खाली जग्गा र ‘फुटपाथ’मा रूख रोपिन्छ। हरेक घरमा कम्तीमा एउटा रूख हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। महानगरले कर तिरेबापत नागरिकलाई फल दिने बिरूवा उपलब्ध गराउँछ। फल दिने रूख भए पो नागरिकले त्यसको संरक्षण गर्छन्। त्यसबाट उत्पादन भएको फल खान पनि पाउँछन्। त्यसलाई अनिवार्य बनाउन महानगरले नीतिगत निर्णय नै गर्छ। महानगर क्षेत्रमा करिब ४५ खाली स्थान छन्। त्यसलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि सदुपयोग गर्न सकिने गरी विकास गर्छौं। यसले महानगर क्षेत्रलाई हराभरा बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। हामीले ‘भर्टिकल गार्डेन’को पनि सोच राखेका छौं। सरकारी कार्यालयमा खाली रहेका जग्गामा पोखरी खन्न र रूख रोप्न आग्रह गर्दछौं।
१५.‘होर्डिङ बोर्ड’ र तारको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन ?
१६।सार्वजनिक शौचालयको उचित प्रबन्ध नहुँदा नागरिक छन्। यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
सरकारी कार्यालयले चर्चेको केही जग्गा लिएर महानगरको लगानीमा सार्वजनिक शौचालय बनाउँछौं। कार्यालयसँग सहकार्य गरी ‘कम्पाउड’को पर्खाल भत्काएर थोरै जग्गामा शौचालय बनाउन सकिन्छ। सार्वजनिक शौचालयको पर्याप्त व्यवस्था गर्न हामीले नगरभित्र रहेका रेस्टुरेन्टसँग पनि छलफल गरेका छौं।
रेष्टुरेन्टको शौचालयलाई पनि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्ने बनाउँछौं। त्यसबापत उहाँहरूलाई करमा केही छुट दिन सकिन्छ। त्यस्ता रेष्टुरेन्टमा विशेष प्रकारका सङ्केत राखिनेछ। त्यस्तो सङ्केत राखेको स्थानमा कसैसँग अनुमति नलिई शौचालयको प्रयोग गर्न सकिन्छ। काठमाडौं महानगरले यस्तो संस्कार विकास गरेपछि त्यो देशव्यापी हुन्छ। यसले रेष्टुरेन्टको व्यापार वृद्धिमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।
१७.काठमाडौंको कला, संस्कृति, यहाँको सांस्कृतिक वैभवलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
यसले नागरिक र देशको आर्थिक अवस्थालाई नै सकारात्मक प्रभाव पार्दछ।
१८.यहाँ स्वतन्त्र रूपमा प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो तर तपाईंका सारथीहरू दलीय प्रतिनिधित्वका साथ प्रस्तुत हुनुहुन्छ होला। कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?
मलाई सबै पार्टीका नेतारकार्यकर्ता तथा जनताले मत दिनुभएको हो। पार्टीबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका व्यक्तिले पनि मलाई मत दिनुभएको छ। उहाँहरूले काम गर्न नदिने, सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन। सबै मेरो ‘सपोर्ट’मा हुनुहन्छ। सबै पार्टीका शीर्ष नेता तथा प्रतिस्पर्धी सबैले मलाई टेलिफोन गरेर सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
हामी कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण नै गर्नेछौं। जनताको पक्षमा काम गर्न कसले नमान्नु होला ररु